Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? - [International Consulting]
> Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense?
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Adin'ny tambajotra amin'ny alalan'ny Ezoic
Fomba hananganana bilaogy tsy misy AdSense
AllFeeds mandrisika tsy tapaka ny dingana fifanakalozan-dresaka
Fantatra, ilay Mpitarika amin'ny Marketing ara-tsosialy
Sovrn: Teknolojia ho an'ny mpampanonta
Criteo: Ny sehatra fampielezana ny aterineto misokatra
Ezoic - Takela-tranonkala ho an'ny Mpamoaka
OpenX: programma dokam-barotra | Ad Exchange Network
Teads: The Platform Global Media
Olona maromaro no nanomboka nampiasa ny programa AdSense Google, kanefa misy ny sasany mahita azy io somary misalasala loatra na tsy manisy izay tena ilainy amin'ny programa dokambarotra.
Na izany aza anefa, ho sambatra ho an'ny olona toy izany, dia misy safidy maro ho an'ny AdSense izay miezaka manazava ny ampahany amin'ny fahalemeny. Ireto misy sombim-pihetseham-po lehibe indrindra avy amin'ilay tapany misy sary miresaka momba ny tsirairay.
Ny fanapahan-kevitsika: Ezoic, izay hahitanao ny mpanolotra fandrakofana mahavariana mahatalanjona indrindra, amin'ny fanatsarana ny fidiranao.
Ezoic | Website Plane for Intelligence For Publishers
Fampakarana fandrosoana fandrosoana 50-250% amin'ny Ezoic. Mpanoratra Google Certified Publishing.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Mitombo ny fidiram-bola amin'ny mpiara-miombon'antoka Ezoic
Ny AllFeeds dia manana dobo filaminana miavaka an-tserasera hijerena. Ankoatra izany, dia misy karazana fanolorana maro izay azonao jerena. Izy ireo dia mirakitra ny mpivarotra, ny tratra, ny fanohanana XML, ny DHTML pop-ups, sns. Ankoatra izany, dia ahitana antsipirihany tsy tapaka ny toetoetranao. Ny tranonkala dia handefa taratasim-bola iray isam-bolana, nanome baiko ny vidim-bola $ 25.00, raha toa ka mandroso ny tombony amin'ny volana manaraka noho ny tsy fahafahanao misafidy. Zavatra mahavariana iray hafa momba ny AllFeeds dia ny fampidirana azy amin'ny Google AdSense, mampitombo ny fidiram-bolanao amin'ny AdSense.
Allfeeds | FITANTANANA REPOBLIKAN-TENIN'I REAL-TIME FOR PUBLISHERS
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Tranonkala Allfeeds
Media.net: Fampahafantarana Contextual and Platform programmatique
Media.net dia mamela anao ny iray ho azonao atao ny mametraka ny lanjany ho an'ny tranokalanao. Azonao atao ihany koa ny mamela na mandà ny fifandraisana izay miseho ao amin'ny tranokalanao (na dia efa nahavita asa tena lehibe aza i AdSense, miaraka amin'ny fantsona URL) Misy koa ny segondra mikajy izay ahafahanao mamantatra ny fomba tsara Mitohy ny tranonkala. Ny fampiroboroboana dia tsy misy afa-tsy ny AdSense ihany, ary toy izany koa fa tsotra ny fananganana. Tahaka izany ihany koa ny fangatahana ho an'ny Media.net.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Tranonkala Media.net
Fantatra mazava ny antony mahatonga azy ho mpanohana vahaolana amin'ny tranokalanao, izay natao hiteraka tombontsoa faran'izay mahavariana ho an'ny pejinao. Izy io koa dia manana dobo famokarana goavam-be izay manome antoka fa misy olona maro haka ny tranokalanao. Na izany aza dia mitaky ny fanadiovana hatrany amin'ny manodidina izany ny AdSense. Araka ny ankamaroan'ny faritra, misy fomba fijery tsy mitsaha-mitohy ary mora amin'ny fiandohan'ity fitantanana ity, fa amin'ny lafiny hafa dia tena azo ampifanarahana.
Fantatra | Ny Mpitarika amin'ny Marketing ara-tsosialy
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Tranonkala mifandraika
Ny RealContext dia mampiasa ny fahaiza-manavaka mba hahasitrana ireo fanentanana manan-danja indrindra ho an'ny pejinao. Ankoatra izany, misy singa fanampiny izay mampiavaka ny RealContext koa. Ny famaritana ireo rantsana dia miankina amin'ny fanapahan-kevitra noraisina taloha ary tsy natao. Izany dia midika fa misy fizotry ny fanakianana izay manome antoka fa hampitombo ny fidiram-bola bebe kokoa avy amin'ny fivarotanao ianao. Ankoatr'izany dia manery ny manakantsakana ny sasany izy io ary manasaraka ny safidy azo antoka sy safidy hafa.
Chitika - Online Advertising Network - Ny fampahalalam-baovao mampivelatra ny fandrosoana
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Tranonkala Chitika
RhythmOne dia mpamatsy entana lojika tena izy. Tahaka ny amin'ny AdSense, ny dokam-barotra dia mifantoka nefa tsy mitsahatra amin'ny fomba rehetra izany. Ny fampiroboroboana dia tena azo ampifanarahana, afaka misafidy avy amin'ny dokam-barotra votoaty, sainam-borona, endrika tselatra, pop-ups, pop-unders or high ups. Azonao atao koa ny mampiseho ny fivelaranao manokana, amin'ny alalan'ny revolisiona, na eo amin'ny toerana misy anao na any amin'ny toerana hafa, izay mahatonga an'i RhythmOne hifangaro amin'ny fandrosoana tsy tapaka. Misy endriny avo lenta mahavariana hatrany ary, toy ny mahazatra amin'ny fitantanana toy izany, dia malalaka ny fiandohana ary tsio-drivotra izany.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : RhythmOne website
Komoona manana sehatra fampiroboroboana miavaka, izay azonao atao ho an'ny tenanao amin'ny fampiasana tsotra amin'ny aterineto. Ianao koa dia mahazo ny zava-miseho manaitaitra amin'ny faritra manodidina, pejy ary refferer. Misy ny fandrindrana miaraka amin'ny Google AdSense ihany koa, amin'ny alàlan'ny google_alternate_ad_url ka mety ho ampiasaina ho Komitin'ny Google Service (Public Service Ads) ny Komoona.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Komoona tranonkala
Ny fandefasan'i Sovrn dia ahafahan'ny mpamadika mizara dokam-barotra fantatra amin'ny lohahevitra na ny ampahany, fa tsy ny teny filamatra mahazatra eo an-toerana. Ny tranonkala koa dia mamolavola ny toerana misy ny mpizara miaraka amin'ireo mpanohana amin'ny tanana mba hanome antoka ny dokam-barotra avoakany. Ambonin'izany, miresaka momba ny fidiram-bola, ny fepetran'ny vola azonao dia soso-kevitra tsy azo hipoitra amin'ny sandan'ny vola Sovrn mahazo ny mpanao gazety.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Web site sovrn
Criteo dia mikarakara bebe kokoa amin'ny mpizara vatana. Manolotra fahefana feno izy amin'ny fijerena ireo dokam-barotra, ny fandrefesana ny famonoana ankapobeny ny tranonkala ary ny fidiram-bola tsaratsara kokoa. Azonao atao ny mandray an-tanana ary mahazo antoka 60% amin'ny vola miditra manontolo. Azonao atao ny mandray karama amin'ny Paypal Bank Checks ary (matetika) fifanakalozana fifamoivoizana koa.
Criteo: Ny sehatra fampiroboroboana ny aterineto misokatra
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Tranonkala Criteo
Ezoic dia hanome anao mihoatra ny 60% amin'ny sandan'ny vola entinao. Ny zavatra azonao dia mihoatra noho ny AdSense, azonao jerena ny fidiram-bola avy amin'ny tranokalanao dia mihamitombo tsikelikely. Afaka mahazo vola amin'ny alàlan'ny PayPal ianao na amin'ny fanaraha-maso amin'ny fotoana fohy, dia nanome fa efa nahazoana 50 dolara izany. Raha toa ka tsy nanao izany ianao, ny fandresena anao dia manomboka amin'ny fotoana manaraka.
Ny fidiram-bola miditra an-tserasera 50-250% amin'ny Ezoic. Mpanoratra Google Certified Publishing.
Ny Birao momba ny varotra | Fahitana mazava kokoa amin'ny fandrosoana haingana
Tahaka ny AdSense, ny Birao momba ny varotra dia maneho ny fivarotana votoaty ao amin'ny pejinao. Na izany na tsy izany, ny fahasamihafana dia eo am-pelatanan'ny mpamoaka ny habetsaky ny fampiroboroboana ny habaka, izay ahazoana antoka fa hahazo tombony betsaka araka izay tratranao ianao. Ankoatr'izay dia midika izany fa ny ampahany dia hampitombo isaky ny fotoana fohy, ka hahazoany vola bebe kokoa. Ianao koa dia mahazo fomba mahazatra hanova ny fampidiran-dresaka amin'ny fampiasana tsotra ny fitaovana sy ny tatitra tsy misy dikany amin'ny toerana misy anao.
Ny Birao momba ny varotra | Fahitana mazava kokoa amin'ny fisian'ny fampahafantarana mivoatra
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Site TheTradeDesk
Smaato: Fandefasana sehatr'asa fampitaovana sy fampindramam-bola
Smaato dia manatanteraka ny lanjany amin'ny fametrahana fantsona araka izay asehon'ny sokajin-tranonao. Manolotra anao ihany koa ny tatitra an-tserasera momba ny toerana misy anao sy ny mety ho fampidirana ny dokam-barotra manokana ataonao izay miteraka fanentanana tsy manangona anao. Ny fametrahana dia fototra, toy izany ihany koa amin'ny AdSense ary tena azo ovaina ihany koa. Izy no foibe sy portable ary fampiharana.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Smaato tranonkala
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Site TripleLift
IPONWEB - Mpitarika manerantany amin'ny tontolon'ny famoaham-baovao amin'ny fotoana mety
Ny tranga IPONWEB dia mitazona fanavaozana izay afaka manararaotra sy manazava ny pejin'ny tranonkala, manome hery azy hampiseho ny votoatiny azo ampiharina amin'ny tranokalanao. Ankoatra ny fampiroboroboana an-tserasera, ny IPONWEB dia manasongadina ny fandefasana hafatra mifandraika amin'ny sarambabem-bahoaka toy ny famaranana mivantana ny fivoahana Sarotra ny manatanteraka azy io ary manana fomba fitsaboana mendrika ihany koa.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Site IPONWEB
Ny OpenX dia mifantoka amin'ny mpivarotra kely sy maoderina. Manatsara ny ilana ny Search Box izy io ary mampiditra ny zavatra toy ny Category Directory toy ny fitsaboana pejy diso 404. Mety tsara ny mandrindra ny pejy amin'ny fampiasana maodim-baovaon-drakitra.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Site openX
Kiosk - Manomboha manamboatra ny tranokalanao miaraka amin'ny Kiosked
Ny Kiosk dia manolotra anao ny 65 isan-jaton'ireo zavatra azonao avy amin'ny fanamarihana ao amin'ny tranokalanao. Vita isam-bolana ny ratra, amin'ny PayPal na amin'ny fanamarinana. Ny fampiroboroboana dia azo amboarina araka izay irinao, ary ny Kiosk dia manolotra ny fanampiana maimaim-poana ho an'ireo olona ao aminy ary tsy misy fiampangàna takiana hisoratra anarana amin'ny fitantanana.
Trion Interactive dia manolotra ny dokam-barotra lojika ho an'ny pejy dynamique, izay midika fa hiova ny fiverenan'ny pejy. Tsy misy afa-tsy sarotra ny mampiasa sy mamela azy ireo hihira ary manolotra fandaminana tsotra. Ireo dokam-barotra dia azo ovaina tanteraka ary ny tatitra momba ny fitiliana dia azo raisina isa-minitra isan'andro.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Trion intuitive site
Teads manolotra distributers ny mety ho fandrindrana ny dokam-barotra ao amin'ny pejiny. Izany dia atao amin'ny taham-pandaminana manokana, miaraka amin'ireo tranonkala ankasitrahanao amin'ny tanana ka mampiharihary endri-javatra vitsivitsy amin'ny drafitra fanentanana lehibe. Ianao koa dia manana safidy anisan'izany ny "Your Add Here" ianao fa ny mpividy dia afaka misintona haingana amin'ny sehatry ny dokambarotra ao amin'ny pejinao. Azo ampiasaina miaraka amin'ny Google AdSense koa izy io, manitatra ny CTR ary manohana ny mety hisian'ny fifandraisana amin'ny Google AdSense. Manana fahefana feno amin'ny fijerinao sy ny fahatsapanao ny anao ianao amin'ny farany, mahazo mahavariana 75% ny zavatra iantsoana ilay mpanao gazety amin'ny vola madinika.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Teads: The Platform Global Media
Araka izany, araka ny tokony ho hita dia misy hevitra marobe ho an'ity karazana fampiroboroboana ity, ary fiaramanidina maro miankina amin'ny AdSense toy ny fampahafantarana. Tahaka izany koa, ny antokon-taonina iray dia afaka miara-miasa amin'ny AdSense mba hahazoana anao ny lanjan'ny fidiram-bola amin'ny sehatry ny dokambarotra.
Ny safidy malalantsika dia ny Ezoic, izay mitantana ny fifaninanana eo amin'ireo mpiara-miasa rehetra ireo.
Inona ny safidy tsara indrindra amin'ny AdSense? : Ny fidiram-bola miditra an-tserasera 50-250% amin'ny Ezoic. Mpanoratra Google Certified Publishing.
AdSense alternative, rezo rezo, dokambarotra an-tserasera, tranokala monetize, ezoic advertisement mediation, bolongana, mahazo vola an-tserasera,